Warar dheeraad ah oo kasoo baxaayo qaabka ay Alshabaab u galeen Xalane iyo nooca gaariga ay ku weerareen - iftineducation.com
Warar dheeraad ah oo kasoo baxaayo qaabka ay Alshabaab u galeen Xalane iyo nooca gaariga ay ku weerareen
iftineducation.com – Warar dheeraad ah oo kasoo baxaayo weerarkii lagu qaaday Xarunta Xalane ee Magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in weerarkaasi ay fuliyeen Kooxo hubeysnaa oo ka tirsanaa Alshabaab.
Xarunta weerarka lagu qaaday ayaa waxaa degnaa Ciidamo ka tirsanaa midoowga Afrika iyo Qaramada Midoobey.
Weerarka oo la sheegay inuu ahaa mid culus ayaa waxaa ka warbixiyay Siyaasiyiin reer galbeed ah oo u waramaayay wakaaladaha wararka ayaa sheegay in weerarka ay soo qaaden ilaa 20 nin oo hubeysan islamarkaana ay gudaha u galeen Xalane.
Cabdicasiis Muscab oo ah Afayeen u hadlay Kooxda Alshabaab ayaa sheegtey mas’uuliyadda weerarka, wuxuuna sheegey in bartilmaameedka uu ahaa xaflad loogu dabaaldagayay maalinta ciidda masiixiyiinta ee Kirismaska.
Afhayeenka ayaa hadalkiisa intaasi ku daray in ay askar ku laayeen gudaha Xalane inta uu weerarka socday.
Sidoo kale, Cali Xaamud oo ah Afhayeenka Ciidamada Midowga africa ee AMISOM ayaa beeniyey warkaasi, wuxuuna sheegey in uusan jirin hal askari oo ay waxyeelo kasoo gaartey weerarka.
Waxaa si lamid ah hadalka Afhayeenka Alshabaab u beeniyay Caalim Sadiiqu oo ah Afayeenka qaramada midoobey ee Soomaali waxa uuna dhankiisa ka sheegay in shaqaalaha Qaramada Midoobey oo dhan ay bad qabaan.
Si kastaba ha ahaatee, warar aanan la hubin ayaa jira oo ka hadlaya in gaari aysan rasaastu karin oo mas’uul dowladeed lahaa ay gudaha ku galeen ragga hubeysan, balse wali ma xaqiijin karno warkaasi.
DEG DEG: Masjid Soomaalida Sweden laheyd oo si xun loo gubay (Sawir)
Dhageyso: Amisom oo ka hadashey weerarki Xalane & xaalka oo isbadalay